Umdwebi odumile waseMerika, uGeorge O'Keeffe , owathi, "Ukudala umhlaba kwizobugcisa ubufuna ubulumko." Umculi waseFransi, uHenri Matisse wathi, "Ukudala kudinga isibindi." U-O'Keeffe noMatisse kunye nabanye abadwebi abachazwe kule ncwadi babantwana kufuneka bawunqobe ubunzima okanye ukuchasana nombono wabo siqu ukwenzela ukudala ubugcisa babo. Wonke umntwana uya kuphefumlelwa ngabaculi ukuba babone ihlabathi ngokumangalisa kwaye balandele apho umbono wabo oyingqayizivele kunye nokucinga kwabo kubakhokelela.
"UVva Frida," ebhaliweyo kwaye eboniswe ngu Yuyi Morales, kwaye ufotozwe nguTim O'Meara, incwadi yemifanekiso ekhethekileyo enika indlela entsha kunye nokuqonda kwimbali eyaziwayo yobomi obuhle, isibindi kunye nobugorha baseMexico uFrida Kahlo. Ibhalwa ngolwimi olulula, ulwimi lweenkondlo, kwiintetho zesiSpeyin nesiNgesi, le ncwadi yenza ilizwi likaKahlo unqwenela ukudala nangona kukho intlungu nobunzima obukhulu, kwaye ubonakalisa ikhono lakhe lokubona nokufumana ugqozi lobugcisa balo lonke. Abalinganiswa bachazwa ngamapopopi afana nobomi kuquka nezilwanyana uKahlo uyakuthanda. Le ncwadi inemvakalelo yemilingo efana neyokuba iza kubafundi abancinci kwaye ivule amehlo abo kwiimimandla ezizungezile. Kwiziko lokufundela ukuya kwibanga lesithathu.
Oku akufani nezinye iincwadi ezichazwa nguFrida Kahlo kwaye zibonisa iimifanekiso zakhe. Kunoko le ncwadi ibonisa inkqubo yakhe yobugcisa nombono, ibonisa indlela umntu angakwazi ngayo ukudlulisela umda ngokuthanda, ubuqili, kunye nentliziyo evulekileyo.
Uyakubona ividiyo efutshane malunga nendlela le ncwadi yenziwe ngayo apha.
"NgeeGeorgia Amehlo ," ebhalwe nguRachel Rodriguez kunye nomfanekiso kaJulie Paschkis , uyinto ehle kakhulu eyenza i-style eyaziwa yindlela enye yezona zinto ziyaziwa ngabafazi bezona zinto ziyaziwayo, kunye ne-Georgia O'Keeffe, obizwa ngokuba ngumama la namhlanje. Le ncwadi ibonisa indlela umntwana waseGeorgia ebona ngayo ihlabathi ngokuhlukileyo kunabanye abantu kwaye uyabonakalisa ubuhle bombala, ukukhanya kunye nendalo. Ukuchitha umntwana wakhe kwasekuqaleni epulazini eWisconsin ulangazelela indawo evulekile ubomi bakhe, kwaye kamva ufumana ikhaya elingokomoya ezintabeni nasezintlango zaseNew Mexico. Uhlala apho kunye neminyaka emininzi kwaye uhamba apho ngokusisigxina ngeminyaka yokugqibela yobomi bakhe. Incwadi ibonisa lo wesifazane okhuthazayo kunye nomculi kubantwana abancinci, abanike umboniso ngobomi bobubomi bahlala bemangaliswe kwaye bekumangaliswe ubuhle ehlabathini. I-nursergart ukuya kwibanga lesithathu.
"Ibhokisi yePainty Paint: Imibala kunye neNzwakala ye-Art of Abstract Art ", yincwadi yesithombe malunga nomdwebi odumile waseRashiya, uVasily Kandinsky, obizwa ngokuba ngumnye wabasunguli bobugcisa obungabonakali kwikhulu lemashumi mabini. Njengomntwana osemtsha waseRashiya, ufundiswa kuzo zonke izinto ezifanelekileyo. Ufunda izibalo, iimbali, kunye nesayensi, uphulaphula iingxoxo zabantu abadala, kwaye uthatha izifundo zepiyano apho afunda khona izikali ukubetha ngokukhawuleza kwe-metronome. Yonke into ibaluleke kakhulu kwaye ayifuni. Xa unina emnika ibhokisi yepeyinti, nangona kunjalo, uqala ukuva i-hers njengoko imibala idibanisa kwi-palette yakhe, kwaye ukuva umculo njengoko upende. Kodwa ekubeni kungekho mntu ungayiva umculo imibala eyenza, ayivumelani nendlela yakhe yokudweba aze amthumele kwizifundo zobungcali. Uphonononga ubugcisa kwaye wenza oko ootitshala bakhe bathetha kuye, ukupenda imibala kunye neefowuni njengomntu wonke, nokufunda ukuba abe ngummeli, de kube ngelinye ilanga enze isigqibo. Ngaba ukhaliphe ngokwaneleyo ukuba alandele intliziyo yakhe aze apeyinise umculo owuvayo noko akuvakalelwa ngokwenene?
Ikhasi lokugqibela le ncwadi linomxholo weCandinsky kunye nemizekelo emininzi yobugcisa bakhe. I-nursergart ukuya kwibanga lesine.
"I-Hat of Magritte," ebhaliweyo kwaye iboniswe nguDB Johnson, ngokucacileyo ibalisa ibali laseBelgium u-René Magritte. Umlingiswa kaMagritte uboniswa yinja ephethe isitya, esekelwe kwisikhati sesiginci sikaMagritte, sithela ngaphezu kwayo kwaye imkhokele kwimidlalo yobugcisa kunye neentlanga, kumkhuthaza ukuba apeyinise izinto eziqhelekileyo ngendlela engavamile kwaye engaqhelekanga. Amaphepha amane avulekileyo afaka umphumo wokuzikhethela kunye nobume bokusebenzisana kwencwadi, okuvumela umfundi ukuba ashintshe umfanekiso ngokuphendulela iphepha elifihliweyo, ngokubhekiselele kwisiqatshulwa sikaMagritte, "Yonke into esiyibonayo iyifihla enye into, sihlala sifuna ukubona into efihlakeleyo oko sibonayo. " Le ncwadi ikhuthaza abaculi abancinci ukuba balandele ingcamango yabo kunye nokuphefumlelwa, naphi na apho kubakhokelela khona.
Inqaku lombhali linika i-biographie emfutshane kaMagritte kunye nenkcazo yokuxolisa. Kwiziko lokufundela ukuya kwibanga lesithathu.
"I-Scissors kaHenri, " nguJeanette Winter, uxela ibali leFrench u-Henri Matisse. U-Winkler uxelela ngemifanekiso emincinci kunye nebali elihambisana ne-Matisse yobuntwaneni kunye nokudala njengoko eba ngumculi odumileyo. Kodwa xa uneminyaka engama-72, ubugcisa bukaMatisse buguquka njengoko ejika kumaphepha epeyinti yephepha kunye nokusika imilo kubo, ngelixa esetyenziselwa ukuhlinzwa. Le mi sebenzi kwakufuneka ibe yinto ethile edumeleyo neyintanda. Njengoko ubugcisa bukaMatisse butshintsha, ngokunjalo, yenza imizekeliso encwadini, ube yizinto ezipheleleyo zekhasi lemilo elula eneembala. Imifanekiso ibonisa u-Matisse ehleli kwisihlalo sakhe esinamavili e-studio yakhe ekwakheni iiklaji. UMatisse usebenza kude kube sekufeni kwakhe, okubhekiselwe kuyo kwincwadi ngokulula nangomusa. Le ncwadi ifakwe kwiingcaphuno zangempela ezivela kuMatisse kwaye ikhupha uvuyo uMatisse obonakalisa ngayo ubugcisa bakhe naphezu kokuguga nokugula, kubonisa ukunqoba komoya wabantu. I-nursergart ukuya kwibanga lesithathu.
Yintoni Ubume Bemibala - Ulwahlulo Lwesikhumba Ngomzimba eMelika
Indlela yokuPolish iLicquer Piano ephelile